China Metal surface nanocomposite silane fitsaboana mpandraharaha IC-2018A (B) sy ny orinasa mpanamboatra | Love Olona novana
Metal surface nanocomposite silane fitsaboana mpandraharaha IC-2018A (B)
nampiasaina ho loko Electrophoresis pretreatment, dia afaka hanangana ny fiovam-po sarimihetsika amin'ny faritra vy toy ny vy, ny zinc, aliminioma sy manezioma.
Coating hateviny: 20-200nm
Mahatsara azy: No misy P, Cr, ny tontolo iainana namana
Fampiharana sehatra: isan-karazany vy
IC-2018A (B) nitendry vy surface nanocomposite silane fitsaboana mpandraharaha
1. vokatra Famaritana
Ny IC-2018A (B) nitendry vy surface nanocomposite silane fitsaboana mpandraharaha dia ahitana Nano tanimanga organosilane mba hahitana vokatra lehibe vatana, ary ny fiovam-po dia afaka mamorona sarimihetsika amin'ny faritra vy toy ny vy, ny zinc, aliminioma sy manezioma.
Taorian'ny tsinjaraina, dia Ultra-manify (20-200 nm) amorphous inorganic-organika ankapobeny sarimihetsika sosona miforona eo amin'ny vy ambonin'ny. Manome ho an'ny metaly hidiran'i tsara sy manaraka coating ambonin'ny efa voavitrana, Manatsara ny ara-batana sy ny toetra mampiavaka ny coating, ary manana ao anatin'ny fotoana fohy harafesina anti-miasa eo amin'ny dingana workpiece.
IC-2018A (B) nitendry vy surface nanocomposite silane fitsaboana mpandraharaha, tsy ahitana singa mampidi-doza toy ny phosphore sy ny chrome. Manana tombony ny angovo mamonjy sy fiarovana ny tontolo iainana amin'ny mari-pana ara-dalàna, dingana tsotra, dingana fohy sy ny vidiny ambany. Tsy safidy tsara ny mampiasa fa tsy nentim-paharazana sy ny chromizing phosphating.
2. Amin'ny alalan'ny fampiasana levitra
Nano Silane Treatment Agent IC-2018A Acidity
Nano Silane Treatment Agent IC-2018B alkaline
Neutralizer NT-120 Alkaline
3. Process mikoriana:
3) Water Wash
4) ny rano Deionized Wash
5) Nano Silane fitsaboana IC-2018A (B)
6) Water Wash
7) Deionized rano Wash
IC-2018A (B) dia tsy maintsy diovina ny menaka, potipoti-javatra, loto, sns tia ho etỳ ambonin'ny ny zavatra tsaboina alohan'ny fanodinana.
Fanamarihana: Ny manaraka fitsaboana electrophoresis tsy mitaky paharitry.
25/200 litatra polyethylene plastika amponga.
Store ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka amin'ny talantalana ny fiainana ny 12 volana.
Previous: Medium-phosphating hafanana avo vahaolana IC-2006
Next: Engine degreaser / Heavy solika madio IC-5051
Nano fiovam-po coating IC-2011
Tontolo iainana vy sarimihetsika namorona mpandraharaha IC-2016
High-Efficiency Degreasing Agent, Optical Glass Cleaning Agent , harafesina Fisakanana ilay Oil , Degreasing Agent Fa Metal , Metal Cutting Oil, Emulsifier nanapaka Oil ,